အင်းစိန်ထောင်ကြီး ကောင်းသွားပြီဗျို့ Good | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အင်းစိန်ထောင်ကြီး ကောင်းသွားပြီဗျို့ Good
အင်းစိန်ထောင်ကြီး ကောင်းသွားပြီဗျို့ Good
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 12, 2010 in Community & Society, Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., Myanma News |9comments
ကျနော် http://www.yinthinnei.blogspot.com မှာတင်ထားတဲ့ သီတဂူဆရာတော် အင်းစိန်ထောင် မေတ္တာအခါတော်နေ့ ဒန်ပေါက်အလှူဖိုင်ကို ကြည့်မိပါတယ်။ အလှူမှတ်တမ်း ဆိုပေမဲ့ တည်းဖြတ်ထားတာတွေကတော့ ဝါဒဖြန့်ချီရေး ဆန်ဆန်ပဲ။ ထောင်သားတွေ စားတာ ပြတာကနဲပြီး ထောင်တွင်း အပြင်အဆင်တွေက ပိုများပါတယ်။ ကြည့်ရသူတွေ အဖို့ကတော့ ထောင်ကြီးက သန့်ပြန့်လို့ ဟုတ်နေလိုက်တာ။ အဲဒီဖိုင်တင်သူများ သဘောရိုးနဲ့ များတောင် ဟုတ်ရဲ့လားမသိ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်းစိန်ထောင် အတွင်းပိုင်းကို တစေ့တစောင်း မြင်ရတာမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ မေတ္တာ ဂရုဏာနဲ့ ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးလှူဒါန်း ကူညီသူများ ကိုလည်း သာဓု ခေါ်ပါရစေ။ တဆက်ထဲ တားမနိုင်ဆီးမရ တွေးမိတာကတော့ ပြည်တွင်းရှိ ထောင်တွင်းအခြေအနေများပါ။ ဘယ်ထောင်မဆို အနည်းနဲ့ အများသာ ကွာမယ်၊ ငရဲကြီးနဲ့ ငရဲလေးပါပဲ။ ရောက်ခဲ့ဘူးသူများသာ ခံစားနားလည်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့်ပဲရောက်ရောက် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ရရှိခံစားရမဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ထောင်တွင်း ရပိုင်ခွင့်၊ ဒါတွေဟာ တိုင်းပြည်ဒေသမရွေး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး တာဝန်ယူပြီး ဖမ်းဆီထားတဲ့ အာဏာပိုင်များ အပေါ်မှာ လုံးဝတာဝန် ရှိပါတယ်။ တာဝန်ခံ ကြရပါမယ်။ လူကြီးတွေလာမှ တံမြက်စီးလှည်း၊ ဆေးသုတ်၊ ရေဖြန်း လုပ်တာတွေကို ရပ်ရပါမယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာမို့ လုံလုံလောက်လောက် မဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အပေါ် နားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက် တွေဖြစ်တဲ့ ထမင်းဝဝစားဖို့၊ ရေသန့်သန့်ချိုးရဖို့၊ လုံလောက်တဲ့ အိပ်ချိန်ရဖို့၊ သင့်တော်တဲ့ အ်ိပ်စရာနေရာ၊ ထောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ အကျဉ်းသားအကြား၊ ဝါဒါတွေနဲ့ သာမန်အကျဉ်းသားတွေ အကြား အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်၊ ရက်စက်ရမ်းကားမှု တွေကတော့ ပြောနေစရာ မဟုတ်တဲ့ စကားလုံးများပါပဲ။ ပြထားတာတွေကတော့ ရယ်လို့မောလို့၊ တဦးနဲ့တဦး လေးလေးစားစား ဟုတ်နေလိုက်ကြတာ။ အပြင်ဖက်ကနေ ထောင်တွင်းအခြေအနေတွေကို ဝေဖန်သူများတောင် ပြန်တောင်းပန်ရ မလိုလို။ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ အိုင်စီအာစီက ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းတော့ အကျဉ်းသား ရပိုင်ခွင့်လေးတွေ နဲနဲပြန်ကောင်းလာပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ သွားမကြည့်ရဲလို့ သူများပြောနဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်ပါတယ် ။ ကောင်းလာတယ် ဆိုတာကလည်း အရင်က ထမင်းကို ပုံစံနဲ့စားရတာကနေ အဝစားခွင့်တို့ စာဖတ်ခွင့်တို့ပါ။ ဒါတွေကလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ ရခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ အတွက် တိုင်းတပါးသားများ ကနေပြီး အော်ဟစ်ပြောမှ ရလာခဲ့တာပါ။
ကိုယ်ပြောချင်တာတွေကို ပြောပြီးတော့ နောင်ရိုက်ကူးသူများ ဆင်ခြင်နိုင်ရအောင် အမြင်မတော်တာလေးတွေကို နဲနဲလောက် ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးလို့သာ သဘောထားကြပါ။
(၁) အိပ်ဆောင်အလိုက် အကျဉ်းသားတွေ တစုတဝေးထိုင်ပြီး ဒန်ပေါက်ဝေတာကို စောင့်တာကို ပြတော့ အခန်းအတွင်း လူဦးရေက ၆၀ သာသာ၊ တကဲ့လူ အရေအတွက်က နှစ်ဆသုံးဆ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ကောင်းကင်ုကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ရင် အဆောင်ပြင်ပ တောင်ယာမှာ ငုတ်တုတ် ထိုင်နေရတဲ့ လူတွေများ တွေ့ရလေမလား။
(၂) လူကြီးတွေ လာမယ်ဆိုရင် အခန်းတွင်းရှိ ရာဂဏန်းချီတဲ့ ထောင်သားတွေဟာ ဖျာကြမ်းခင်းထားတဲ့ သံမသလင်းအပေါ် တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ပြီ့း မလာမခြင်း စောင့်နေပေတော့။ ဆရာတော်နဲ့ အလှူရှင်တွေ အဆောင်အတွင်းမှာ ဒန်ပေါက်ဝေတော့ ထောင်သားတွေခင်ဗျာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ စောင့်ခဲ့ရပါလိမ့်မလဲ။ ဒန်ပေါက်ဟင်း စားလိုက်ရလို့ ထောင်သားတွေ စောင့်ရကြိုး လိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။
(၃) ထောင်တွင်းလျောက်ကြည့်တော့ ထမင်းချက်ဆောင် ဖိုကြီးမှာ အလုပ်လုပ်နေသူ အကျဉ်းသားတွေနဲ့ တွေ့တာပြပါတယ်။ တချို့ပြကွက်တွေမှာ အကျဉ်းသားက ပုံစံထိုင်တဲ့ အနေအထားနဲ့ပါ။ ပုံစံထိုင်တယ်ဆိုတာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ဒူးပေါ်တန်း ဆန့်ထား၊ ဦးခေါင်းကို ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ငုံ့ထားရပါတယ်။ ခေါင်းမော့လို့ မပြောမခြင်း၊ ဘာမှ မမေးမခြင်းပေါ့။ မတ်တပ်ရပ်ရင်လည်း ခြေစုံရပ် ငယ်ပါရှေ့မှာ လက်နှစ်ဖက်ကို ယှက်ပြီး ခေါင်းငုံ့ထားရပါတယ်။ ဒါတွေကို ပြကွက်ထဲမှာမတွေ့ရပါ။ အားလုံးက လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ သက်တောင့်သက်သာ။ အင်း.. နအဖတော့ စိတ်ပြောင်းသွားပြီ ထင်ပါရဲ့။
(၄) ထောင်ဆေးရုံကို ပြတော့လည်း ချောင်ချောင်ချိချိ သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ ဟုတ်ပါ့မလား မောင်ကာဠုရယ်။ သေခါနီးမှ ကုပေးတာ၊ ပိုက်ဆံပေးမှ ဆေးရုံတက်ခွင့်ရတာ၊ ဆေးထိုးအပ် တချောင်းထဲနဲ့ လူပေါင်းစုံကို ထိုးတာ၊ ဒါတွေက အတိုက်အခံတွေရဲ့ သက်သက်မဲ့ အစိုးရကို နာမည်ဖျက်တာနဲ့ တူပါရဲ့။
ဒါတွေကို ပြောနေရတာက ဆရာတော်ကြီးရဲ ထောင်တွင်းအလှူကို ညစ်နွမ်းလိုစိတ်နဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထောင်သားတွေဆိုတာ အဖက်ဖက်က တားဆီးပိတ်ပင် ခံနေရတဲ့ လူအရေခွံ အချွတ်ခံထားရတဲ့ တရိစ္ဆာန်သာသာ ဘဝတွေပါ။ ဘာအကူအညီပဲဖြစ်ဖြစ် ငတ်ပြတ်နေသူ တွေအဖို့ နတ်သုဒ္ဓါတမျှ တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ပဲလှောက်၊ ထညက်ခဲလေးက အစအရသာရှိလှပါတယ်။ ထောင်မပြောနဲ့ အမိမြေနဲ့ဝေးနေသူများတောင် အရင်က မကြည့်ခဲ့ မစားခဲ့တဲ့ ရိုးရာအစားအစာတွေအပေါ် တပ်မက်ကြပါတယ်။ စိုးရိမ်မိတာက အပေါ်ယံကြော ရိုက်ပြတာတွေကို ကြည့်ပြီး ထောင်သားတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေ၊ မတရားမှုတွေ၊ ထောင်တွင်း အနေ အထားတွေကို သိပ်မဆိုးဘူးဟေ့လို့ ထင်သွားနိုင်လို့ပါ။ သူများပြောတိုင်း မယုံပါဘူး ဆိုပေမဲ့ ထောင်တွင်းဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေများကို အခုလိုမျို ရိုက်ပြထားတာ မရှိတဲ့အခါ တဖက်ရဲ့ ဟန်ဆောင် ဖုံးကွယ်မှုတွေကို သိသိကြီးနဲ့ လက်ခံသလိုမျိုး ဖြစ်သွားတတ်လို့ ဝေဖန်ချက် အနေနဲ့ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ ကည့်လိုသူများ အောက်ပါ လင့်ခ်မှာ သွားပြီး ကြည့်ရှု သဒ္ဓါတရားပွားနိုင်ကြပါတယ်၊ သာဓု သာဓု သာဓု။ http://www.4shared.com/video/yZk2fqD7/U-Nyanissara-InnSein-Prison-21.htm
If the government get free all political prisoners and unhealthy persons from Insein jail, it is glad to hear for all.Hoping the best news before election!
အခွေမှာ ကြည့်တုန်းက တသက်တကျွှန်းကျတဲ့ လူတွေကို ကြည့်ပြိးတော့ အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်.. လူငယ်လေးတွေ တောင်ပါသေးတယ် ဘာအမှုတွေလဲတော့ မသိဘူးပေါ့လေ..
သန့်ရှင်းလွန်းလို့.. ဆရာတော်ကြီး မလာခင်တော့ သေမလောက် လုပ်ရမလား မသိဘူးလို့.. အတွေးဝင်မိတယ်..
ဒါတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေါက်ရိုးကြိုးအောင်ရှိနေတဲ့ အကျင့်ဘဲ။ လူကြီးတွေလာ ရင် အသေလုပ်ရတာ ငယ်ငယ်ကတည်းကပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာ ပညာရေးမှုးလာမှာ၊ ဘယ်သူလာမှာဆို မလာခင် ကတည်းက နောက်ဆုံးချိန်ကို စာမသင်ဘဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာ။ ဒါမျိုးဆိုကို တို့က ပျော်တာပေါ့.. တကျောင်းလုံး တံမျက်ဆီးတချောင်းကိုင်ပြီး လျှောက်လေလိုက်ခဲ့ရတာ။ same same လား…
ထောင်းတွင်းဇာတ်လမ်းတွေ၊ ၀တုတွေ ဖတ်ဘူးပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုနဲ့ တခြားဆီဘဲ။ ပြောချင်တာက ဆရာတော်ကြီးမလာခင် ထောင်သားတွေ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းခဲ့မလဲ။ သေချာတာတော့ ဒီလက်အုပ်ချီနေတဲ့ကောင်ကတော့ ဘာမှ မလုပ်တာသေချာမှာဘဲ။ ဒီထောင်သားတွေထဲမှာ ပြောတဲ့သူတွေလဲရှိမှာ ဘဲ ဆရာတော်လာမှာကို ကြောက်နေပြီလို့။ ဆရာတော်လည်း သိမှာဘဲ ဒီကောင်တွေငါ့ကို ညာပြီး ပေါ်ယံထုံးသုပ်ထားတာဆိုတာ။ ဘေးက ကျွန်တော်တို့လို လူတွေလဲသိပြီးသားဘဲ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေကို ဘယ်လို လုပ်ပြီး ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ။
ဒံပေါက်တနပ်စာ စားရဖို့ထက်၊ ဗီဒိုယို မရိုက်တဲ့ အချိန်၊ ဆရာတော်တွေ လူကြီးတွေ မလာတဲ့အချိန် မှာ ရသင့် ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေရဖို့ဘဲ အဓိက လိုပါတယ်။ ဆရာတော်လည်းသိမှာပါ အခြေအနေအားလုံးကို ဆရာတော် ဘာတွေ မှာကြားပြီး၊ ဘာတွေ တကယ်ဘဲ လက်တွေတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ ဘာတွေမှာကြားခဲ့သလဲ သိချင်လိုက်တာ။ ဒီ ဗီဒီယိုကားက အစိုရရဲ့ဝါဒဖြန့်ဖို့ သက်သက် အသုံးမချ ခံရပါစေနဲ့။
ဆူးစိတ်ထင်တာတော့.. ဆရာတော်ကြီးက အနနည်း သို့မဟုတ် ပညာရှိနည်းနဲ့.. လူတွေ စိတ်ကို သိမ်မွေ့အောင် သိမ်းသွင်းချင်လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ဘာမှ မကောင်းတာ တခွန်း မပြောသွားဘူး.. သူတို့ကို ချီးကျူးလိုက်တာတောင် ပါသေးတယ်.. တိုးတက်မှု ရှိလာပြီ ဆိုပြီး.. ကောင်းတာလေးတွေ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းပေးဖို့.. စကားပုံနဲ့ ပြောရင် အရူးဘုံမြှောက် ချီးခြောက် ကောက်စား.. အဲလိုမျိုး ဘ၀င်မြင့်ပြီး စိတ်ကောင်းထားပေးအောင် ချော့ပြောသွားတယ်လို့ ခံစားရတယ်.. ဆရာတော်ကြီးလည်း သိမှာပါ.. သူ့နားမှာ တပည့် ဒကာတွေ အများကြိး ရှိတာဘဲ.. သတင်းတွေကတော့ စုံနေမှာပေါ့.. ကိုယ်မသိတာတောင် သိနေချင် သိနေမှာပါ။
သာမန်အားဖြင့်တော့ ..ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်..အသစ်တက်တဲ့အစိုးရက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်ထုတ်ပြီး အကုန်လွှတ်ရတာပဲ..။
အဲ..ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် တက်လာမဲ့အစိုးရကို.. ထောင်တော့ ကောင်းအောင်..နေပျော်အောင်လုပ်ပေးဖို့ …မှာချင်ပါကြောင်း..။ မဲဆွယ်ရင် (အဲဒါလေးထည့်ပြိး )ရွေးကောက်ပွဲကတိလေးပေးစေချင်ကြောင်း..။
မရပါဘူး….. မသနားတာမဟုတ်ပါဘူး… ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ထောင်ဆိုတာပြုပြင်ရေးစခန်းတစ်ခုပါ….
အထက်က စာသားတွေက ကိုယ်ချင်းမစာတတ်တဲ့ စကားတွေကြီးပါဘဲလား..
ခိုးစိုး လုယက် မတရား အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ သူတွေ မတော်မတရား လုပ်ရပ်တွေနဲ့ သူတပါး မျက်ရည်ပေါက် ကြီးငယ်ကျနေတဲ့ သူတွေ အတွက် ထောင်ဆိုတာ ပြုပြင်ရေး စခန်းပါ။ ပညာတတ် လူကောင်းလူမွန်တွေ အတွက် အများအကျိုး ဆောင်ရွက်သူတွေ အတွက်တော့…